ဒီပတ်ပတ်လည်၏ယခင်စာပမြေား၌ခေါ်တော်မူ « Shell Scripting ကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏အစီအစဉ်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တည်ဆောက်ပါ» အောက်ပါ module တွေဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်ရမယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးပြီးပြီ။
ဘယ်ပရိုဂရမ်ရဲ့ module (အပိုင်း) ဖြစ်သင့်သည် ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်ယခင်ကသတ်မှတ်ထားသောအသုံးပြုသူများသာသင်၏ပရိုဂရမ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောလည်ပတ်မှုကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသေချာစေသည်။ ၎င်းတွင်ခွင့်ပြုထားသောအသုံးပြုသူများအတွက်စကားဝှက်တစ်ခုပါဝင်ကောင်းရှိနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုသူအမည်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်အတည်ပြုခြင်းကိုလေ့လာပါမည်။
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီ module ကိုဖန်တီးရန်အောက်ပါလိုင်းများကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ထည့်ပါ။
သင်မြင်သည်အတိုင်း, ဒီ module ကိုသင်၏ပထမ ဦး ဆုံး configure နောက်ခံအပြာမှ terminal မျက်နှာပြင် တစ်ဘို့ အသုံးပြုသူ၏ပိုကောင်းအမြင်အာရုံလေးမွတျထို့နောက်ထုတ်လွှတ်သည် အာရုံမက်ဆေ့ခ်ျ နှင့် ကဗျာ y ရုပ်ပုံလွှာ နှင့် ပဲ့တင်သံ y ပေးတဲ့ dialog။ ထိုအခါ command ကိုအသုံးပြု။ ကွင်းဆက်မှတဆင့် မှီတိုငျအောငျ တန်ဖိုးအဘို့အထဲသို့ဝင်သော validates user name ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ တရားဝင်အသုံးပြုသူတန်ဖိုး (များ) ယခင်ကသတ်မှတ်ထားသောအသုံးပြုသူကိုစာလုံးကိုရိုက်ခြင်းဖြင့် program ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပိတ်နိုင်ခြင်းကိုပေးသည် အပြင်ထွက်သည်။ အသုံးပြုသူအတည်ပြုချက်သည်အောင်မြင်လျှင်စကားဝှက်နှင့်အတူထိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ အသုံးပြုသူနှင့်စကားဝှက်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ပြုလုပ်ပြီးပါကအဆုံးသတ်ရန်အဆုံးသတ်ရန် ရိုးရှင်းတဲ့မီနူး လုပ်တယ် ပေးတဲ့ dialog User X သည်ပရိုဂရမ်ဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လုပ်လို၊ မလိုလိုမေးသည်။ သို့ဆိုလျှင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထုတ်ပေးပါ တိုးတက်သောဘား စောင့်ဆိုင်း command ကိုနှင့်အတူပြုသောအမှု အမှု.
စီစဉ်ပါသို့မဟုတ်စဉ်းစား! ပထမ ဦး ဆုံးဘာလဲ o ဘာကပိုအရေးကြီးလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရိုဂရမ်းမင်းကိုစတင်သောအခါကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသင့်သောပထမဆုံးအချက်မှာယုတ္တိဗေဒနှင့်သင်္ချာကိုလေ့လာရန်သီအိုရီအခြေခံအနေဖြင့် algorithms သို့မဟုတ် flow diagram များဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပရိုဂရမ်းမင်းကိုစတင်ရန်လုံလောက်သောသို့မဟုတ်လုံလောက်သောအခြေခံဖြစ်သည်။ ။ နားလည်ပါ ပရိုဂရမ်လေ့လာရန်၊ မလုံလောက်သေးဘူး၊ လိုအပ်တယ် စဉ်းစားတတ်ရန်သင်ယူပါ။
2 ငါပြAနာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လိုအပ်သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစွမ်းရည်, ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်ယူနှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုမြင်?
ထို့အပြင်အသုံးအများဆုံးသို့မဟုတ်အစွမ်းထက်သောမည်သည့်ဘာသာစကားဖြင့်မဆိုပရိုဂရမ်ရေးရန်သင်ယူခြင်းသည်မငြင်းနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများကိုတီထွင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနည်းပညာဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများရှိပြproblemsနာများကိုရှာဖွေရန်ကူညီပါသည်။ ၎င်းသည်အလုပ်ဈေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တံခါးဖွင့်ပေးသည်၊ သို့သော်ပရိုဂရမ်သည်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာ၏သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
စဉ် ပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်ရေးကုဒ် ကွန်ပျူတာကို (လျှောက်လွှာ၊ ဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်စနစ်မှတစ်ဆင့်) လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်သင်ကြားပေးခြင်းပါ ၀ င်သည် ရွေးစရာ X တစ်ခုအော်ပရေတာတစ်ခုသို့မဟုတ်အားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် အဖြစ်အပျက် X ၎င်းကိုထောက်ပံ့သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲသို့မဟုတ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) တစ်ခုတည်းမှသို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ (သတင်းအချက်အလက် / စနစ်များ) ၏အခြေခံမူ သူတို့ကကျမတို့ကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုနှင့်နည်းပညာထက်အခြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးဝင်သောယုတ္တိဗေဒစွမ်းရည်များသင်ပေးသည်။ ကွန်ပြူတာသိပ္ပံသည်အနှစ်သာရအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုသင်ပေးသည်။
ငါဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ယူပြီး, ဒီအခြား post ကိုခေါ်ရှင်းပြပါ ကုဒ်သင်ဖို့မလေ့လာပါနဲ့။ စဉ်းစားရန်သင်ယူပါ» de Yevgeny Brikmanဒီအင်ဂျင်နီယာကဘယ်လိုပရိုဂရမ်ဘယ်လိုရေးရမယ်ဆိုတာသိပြီးကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်လိုဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုတဲ့ခြားနားချက်ကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေနည်းပညာသည်နေရာအနှံ့တွင်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်သင်ယူရေးစင်တာတစ်ခုတွင်လေ့လာသောအခါ၎င်းကိုသင်ယူရန်မဖြစ်စေပါ။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်ဘဝတစ်ချိန်ချိန်တွင်မည်သူမဆိုလေယာဉ်ပျံသန်းစဉ်တစ်ခါမှမပျံနိုင်ခဲ့ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူနိုင်သည်။ သို့သော်ထိုနေရာမှလေယာဉ်မှူးလိုင်စင်ရရှိသည်အထိသွားရန်အလွန်ရှည်လျားသောလမ်းရှိသေးသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ၏တရားဝင်လေ့လာမှုများ, ဒါပေမယ့်တိကျတဲ့onရိယာအပေါ်အလွန်အထူးသဖြင့်လေ့လာမှုများ။
အသေးစိတ်ရှင်းပြထားသည့်အချက်မှာ၊ လေယာဉ်ပျံများ၏အခြေခံအလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူမဆိုရှိနိုင်သည့်အသိပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့အလယ်တန်းနှင့်တက္ကသိုလ်ပညာရေးမှရရှိသောရူပဗေဒနှင့်သင်္ချာစသည့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း (အင်ဂျင်နီယာ) တွင်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ လေယာဉ်ထဲတွင်ရောက်ရှိနေသောအင်အားစုများနှင့်ဆွဲငင်အား၊ လေထုဖိအား၊ အမြန်နှုန်း၊ ပွတ်တိုက်မှု (သို့) ဓာတ်လှေကားများကဲ့သို့သောပြင်ပဒြပ်စင်များမည်သို့မည်ပုံနားလည်သည်။ ဇီဝဗေဒကကျွန်ုပ်တို့ကို X အမြင့်တွင်မည်သို့ပြုမူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ အောက်စီဂျင်ကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းအအေးမိခြင်းမှမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုလည်းကောင်းကျွန်ုပ်တို့အားနားလည်စေရန်ကူညီသည်။ ဒါမှမဟုတ်လေယာဉ်တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးခဲ့သလဲ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမှာသူတို့ဘယ်အခန်းကဏ္ play မှပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိစေတဲ့အဖြစ်အပျက်။ အမျိုးမျိုးသောအသိပညာနယ်ပယ်များမှသင်ကြားရေးစင်တာတစ်ခုတွင်စုဆောင်းရရှိသောဤအသိပညာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလေယာဉ်ပျံတစ်လုံးနှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုယေဘူယျအားဖြင့်ပေးသည်။ အထွေထွေဘာသာရပ်များသည်လေယာဉ်ပျံသန်းပုံအပါအဝင်ပြproblemsနာအမျိုးမျိုးကိုနားလည်ရန်ကူညီသည်။ ထိုစက်ပစ္စည်းများထဲမှလေယာဉ်အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားသင်ကြားပေးသည့်အထူးပြုဘာသာရပ်နှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ထို့ကြောင့်တူညီသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံကိုလေ့လာခြင်းကိုသာအာရုံစိုက်သင့်သည်။ Computer Science သည်ယေဘုယျအားဖြင့် (စနစ်ကျသော) သဘောဖြင့်စဉ်းစားရန်ကမ္ဘာအနှံ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုသင်ကြားစဉ်ကတည်းကပရိုဂရမ်သည် Y ကိုအယူအဆတစ်ခုသို့မဟုတ်ပြproblemနာတစ်ခုအား Code X မှတစ်ဆင့်ဘာသာပြန်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ယခင်က (မှန်ကန်စွာသို့မဟုတ်မှားယွင်းစွာ) ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
ဤနှင့်များစွာသောအခြားရှုထောင့်ကလှူဒါန်းခဲ့သည် Yevgeny Brikman အဘယ်အရာကိုအကြောင်းကိုမိမိအ post ကို၌တည်၏ အစီအစဉ် ၎င်းသည်အတွင်း၌ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအသိပညာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံတိုင်းပရိုဂရမ်မာများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ အရေးကြီးဆုံးပညတ်တော်များကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်တိုးတက်ရန်သတိရပါ GNU / Linux များ သူတို့နောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုအသိပညာတိုးဆက်လက်နှင့်အချို့သော၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ ဤနေရာတွင်တင်ပြကြောင်း module, function ကို, variable ကို, command ကိုသို့မဟုတ်အရေးယူ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောနည်းလမ်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အောက်မှာ ငါကပြသသည့်ရုပ်သံဤ module ၏မည်သို့ဆောင်ရွက်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည့်နေရာ၊ သင်ကြားပို့ချမည့်ယခင်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်သင်ကြားမည့် modules များ၊ Shell Scripting ၏အလားအလာကိုအလယ်အလတ်အဆင့် (အဆင့်မြင့်မဟုတ်) -
LPI-SB8 စမ်းသပ်မှု ScreenCast
(LINUX POST ကိုထည့်သွင်းပါ - BICENTENNIAL SCRIPT 8.0.0) - အပိုင်း 2
ငါမှန်ကန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါလျှင်ရှိသည်။ အသုံးပြုသူအားသူတို့၏အသုံးပြုသူအမည်ကိုရိုက်ထည့်ရန်တောင်းဆိုသည်။ သင်၏စကားဝှက်ကိုရေးထည့်ပြီးတဲ့အခါ ... စကားဝှက်သည် "lpi * sb8" ... နှင့် script ထဲတွင် "hardcoded" ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည် script ကိုအသုံးပြုခွင့်ကိုဖတ်ပါက… bingo !! …သူတို့သည်မည်သည့်အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုထည့်ရမည်ကိုသိပြီးဖြစ်သည်။
ငါတစ်ခုခုအမှားလုပ်မိရင်ငါမသိဘူး ... ဒါပေမယ့်အဲဒီလိုဆိုရင်တော့အဲဒါကမလုံခြုံဘူး ...
ဖြတ်သန်းခဲ့သူတစ် ဦး မှတုံ့ပြန်ပါ
ဟုတ်တယ် ယခုငါနည်းလမ်းတစ်ခုကိုငါပေးပြီ။ လူသားမျိုးနွယ်၏စရိုက်လက္ခဏာကိုသိသောပင်ကိုစူးစမ်းသိလိုစိတ်နှင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်၎င်း၏လုံခြုံရေးကိုကောင်းမွန်အောင်ကြိုးပမ်းရမည်။